Fanandramana haingana amin'ny teny Anglisy sy ny fiteny vahiny. Fomba tsara indrindra hianarana
Karatra amin’ny fiteny ho an’ny fiteny vahiny
Ny karatra amin’ny fiteny fianarana fiteny vahiny dia fomba tsotra sy mahazatra indrindra amin’ny fandalinana ny tena. Ny lafiny iray dia misy teny sarotra, ary ny lafiny iray dia manana dikany na fandikan-teny. Rehefa avy nanao ny sarin’ny karatra ianao dia manomboka mijery ny karatra, mametraka tsikelikely ny zavatra efa nianaranao, mandra-pahaizanao ny deck rehetra. […]
Ahoana no hanatsarana ny voambolana? Ny mpianatra tsirairay mianatra fiteny vahiny dia manontany ity fanontaniana ity. Misy fomba maro hanatsarana ny voambolana, izay hodinihintsika ato amin’ity lahatsoratra ity: 1. Mihaino sy mamerimberina ireo teny tianao hotsiahivana 2. Ampiasao ny metatra flash katolika 3. Mamorona fikambanana miaraka amin’ny sary 4. Mahatsiaro ireo fehezan-teny sy andian-teny misy […]
Ahoana ny fomba hianatra haingana anglisy?
Ahoana ny fomba hianatra haingana anglisy? Nanontany tena ity fanontaniana ity aho roa taona lasa izay (teo amin’ny faha-32 taonany). Nanomboka nazoto nianatra fiteny iray avy amin’ny tabataba aho, nahitako olana telo lehibe: 1. Hatsarao ny voambolana sy ny fitehirizana ny teny henjana 2. Tsy manam-potoana hanaovana fianarana amin’ny fiteny vahiny 3. Ahoana no ahitan’ny […]
Ahoana no ahitan’ny mpandahateny miteny amin’ny fiteniny? Ity fanontaniana ity dia mahaliana amin’ny sain’ny olona tsirairay izay mianatra fiteny vahiny. Taorian’ny fampivoarana ny dikan-teny voalohany amin’ny fampiharana LingoCard amin’ny finday dia ny fametrahana azy ho an’ny besinimaro sy ny fahafahana miditra, ny app dia nahazo mpampiasa an’arivony. Ahoana kosa ny amin’ny fitenin’ny fiteny? Nieritreritra izahay […]